အိဖူး၏ စာမျက်နှာ: 2012
နေ့တစ်ဝက်ရုံးဆင်းတော့ သူနဲ့တွေ့ဖို့သွားတော့ ဘတ်စ်ကားစီးဖြစ်တယ် (သူနဲ့မတွေ့လည်း စီးပါတယ်)။ ကျွန်မစိတ်ထဲ ငြီးစီစီနဲ့ ပျင်းရိနေတယ်။ ကလိကလိဖြစ်တာနဲ့ ဘာရယ်မဟုတ် ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ စိတ်ကူးမိတယ်။
ဘယ်လိုရိုက်သလဲဆိုတော့ကာ ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ရန်ကုန်မြို့ရောက် တိုင်းတစ်ပါးသားပုံစံ ဟန်ဆောင်မိတယ်။ စပယ်ယာဆီမှာ စတင်သရုပ်ဆောင်လိုက်တယ်။
“နွယ်သာကီး နွယ်သာကီး.. how much? 100 Kyats? ”
စပယ်ယာ နည်းနည်းကြောင်သွားတယ်။ ကျွန်မကထပ်မေးလိုက်တယ်
“100 Kyats? ”
စပယ်ယာက ခုမှသိသွားပြီး လက်နှစ်ချောင်းထောင်ပြတယ်။
“oh 200 Kyats.. ok”
ပိုက်ဆံ ၂၀၀ ပေးလိုက်ပြီး ခပ်တည်တည်နဲ့နေလိုက်တယ်။ စပယ်ယာနဲ့တကွ အနီးအနားကလူတွေ ပြုံးသွားတယ်။ ယုံသွားကြတယ်။ ပြုံးတာကတော့ ဘတ်စ်ကားလာတိုးစီးတဲ့ နိုင်ငံခြားသားကောင်မလေးကို သဘောကျလို့ပဲလား ဘာလား။ (ခုမှပြန်ရီချင်တယ် အဲ့တုန်းကတော့ မင်သေသေနဲ့ပဲ)
ကျွန်မပိုက်ဆံပေးပြီး ရပ်နေတယ်။ ကားက အရမ်းကြီးကျပ်မနေပါဘူး။ မတ်တပ်ရပ်နေတဲ့လူ လေးငါးယောက်လောက်တော့ရှိတယ်။ အန်ကယ်ကြီးတစ်ယောက်က လှမ်းခေါ်တယ်။
“come come..aplace,aplace”
ကျွန်မနေရာရသွားတယ်။ ဘတ်စ်ကားက ကုက္ကိုင်းမှတ်တိုင်ကိုရောက်လာတယ်။ အဲ့ဒိမှတ်တိုင်မှာ အဖွားကြီးတစ်ယောက်တက်လာပါတယ်။ အသက်ကြီးကြီး ယောဂီဝတ်စုံနဲ့။ ကံဆိုးစွာနဲ့ပဲ အဲ့ဒိအဖွားကြီးအတွက် နေရာမရှိပါဘူး။
ကျွန်မကားပေါ်ကို တစ်ချက်ခြုံငုံကြည့်လိုက်တယ်။ ကျွန်မရဲ့ဘယ်ဖက်ဘေးမှာ ကျွန်မကိုနေရာပြတဲ့ အန်ကယ်ကြီး။ သန်သန်မာမာကြီးပါပဲ။ ညာဖက်ဘေးမှာက ကောင်လေးကောင်မလေးတွေ အဖွဲ့ရှိတယ်။ စကားတွေကျွတ်ကျွတ်ညံအောင်ပြောကြ ရီလိုက်ကြလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့ပေါ့။
ကုက္ကိုင်းမှတ်တိုင်မှာ တက်လာတဲ့အဖွားကြီးက ကျွန်မတို့နားမှာ ရပ်နေပါတယ်။ အဲဒိအဖွားကြီးကို ဘယ်သူများနေရာပေးမလဲလို့ ကျွန်မစောင့်ကြည့်နေမိတယ်။ ကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံက ဘတ်စ်ကားတွေပေါ်မှာ ဘုန်းကြီးတွေ၊ အသက်ကြီးတဲ့လူ၊ ကလေးနဲ့လူ၊ အထုပ်အပိုးတွေပါတဲ့လူတွေ ကားပေါ်တက်လာရင် ကားပေါ်ကလူတချို့က နေရာပေးတတ်တာ၊ အထုပ်ကိုင်ပေးတတ်တာတို့ အဲဒိဓလေ့လေးတစ်ခုရှိတယ်မလား။ ဒီနေရာမှာ တစ်ခုထပ်ပြောချင်တယ်။ တချို့သောလူတွေပဲ သိတတ်တော့တယ်လို့ ကျွန်မပြောရင် အားလုံးယုံကြမလား။
အဲဒိအဖွားကြီးကို ကျွန်မကြည့်နေတယ်။ ကားက Sedona Hotel ကို တော်တော်ကျော်လာပါပြီ။ အဖွားကြီးနေရာမရသေးဘူး။ ဘယ်သူမှမတွေ့တာလည်း မဟုတ်ဘူး။ မမြင်ချင်ယောင်တောင်ဆောင်နေလိုက်သေးတယ်လို့ ကျွန်မထင်တယ်။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်မစိတ်မရှည်တော့ဘူး။ (ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဟန်ဆောင်တာတောင် မေ့သွားတော့မလို့၊ ဒါပေမယ့် မမေ့ဘူး :P)
အဖွားကြီးကို လက်တို့ခေါ်လိုက်ပြီး “come here and sit, come ”ဆိုပြီး နေရာဖယ်ပေးလိုက်တယ်။ အဖွားကြီးက thank you တွေဘာတွေလည်း ပြန်မပြောတတ်တော့ အမူအရာနဲ့ပဲ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲပြုံးပြတယ်။ မြန်မာအချင်းချင်းမဟုတ်ပဲ တစ်နိုင်ငံခြားကောင်မလေးက သူ့ကိုနေရာဖယ်ပေးတာ သူသိသွားပါလိမ့်မယ်။ အဲဒိအချိန်မှာ ကျွန်မကိုအားလုံးဝိုင်းကြည့်နေတယ်ဆိုတာ ကျွန်မသိတယ်။ ရုတ်တရက်ကြီး ကားကတိတ်သွားတာကိုး။ ကောင်လေးကောင်မလေးတွေအုပ်စုလည်း စကားမပြောတော့ဘူး။ တစ်နည်းပြောရရင် ကျွန်မက နေရာဖယ်ပေးလိုက်တာကို သူတို့ရှက်သွားပုံပဲ။ လူမျိုးခြားကဖယ်ပေးမှ ထိုင်ရတဲ့အဖွားကြီးကို အခုမှတွေ့သလိုလို လုပ်နေကြတယ်။
ကျွန်မ ဒေါသထွက်ပါတယ်။ အစကတော့ ပျင်းပျင်းနဲ့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့သဘောပဲ။ အခုတော့ အပျင်းပြေ ဒေါသထွက်ဖြစ်သွားရတယ်။ မြန်မာလူမျိုးအနေနဲ့သာ အဲဒိအဖွားကြီးကို နေရာဖယ်ပေးလိုက်ရင် သူတို့ဘယ်သူမှ သတိထားမိမှာတောင် မဟုတ်ပါဘူး။ အခုက ကျွန်မဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်လုပ်ထားတဲ့အတွက် သူတို့ရှက်သွားကြတာ။ သူ့ဘေးမှာထိုင်နေတုန်းကတော့ ပြုံးပြုံးကြီးနဲ့ တစ်ခုခုပဲပြောတော့မလို၊ မိတ်ပဲဆက်တော့မလိုတွေလုပ်နေတဲ့ ကျွန်မကို နေရာပေးတဲ့အန်ကယ်ကြီးကလည်း ကျွန်မဖက်ကို လှည့်တောင်မလာတော့ပါဘူး။ ကောင်လေးကောင်မလေးတွေလည်း မရီနိုင်တော့ဘူး။ ဒါဘာလဲ မလုံမလဲဖြစ်ကြတဲ့သဘောလား။
မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ သနားညှာတာ ရိုင်းပင်းတတ်ကြတယ်တဲ့။
ကျွန်မကဘာပြောရမလဲတောင်မသိဘူး။ အူကြောင်ကြောင်မျက်နှာပေးလေးနဲ့ပဲ ဆက်လက်သရုပ်ဆောင်နေလိုက်တယ်။ နွယ်သာကီရောက်တဲ့အထိ ကျွန်မနေရာမရတော့ပါဘူး။
နွယ်သာကီရောက်တော့ သူကလမ်းထိပ်ကို လာကြိုပါတယ်။ နေ့လည်စာအပြင်မှာစားတော့ ဆိုင်ရောက်တော့ မနေနိုင်မထိုင်နိုင် သူ့ကိုပြောပြမိတယ်။
“မင်းကလည်း တော်တော်ဆော့” တဲ့။
Posted by အိဖူး at 8:14 AM3comments:
Labels: အိဖူးအကြောင်း သိကောင်းစရာ
ဒီနေ့ (22.6.2012) ရက်နေ့
မိုးလင်းကတည်းက စိတ်ကြည်လင်ပါတယ်.. ရေမိုးချိုး ခေါင်းလျှော် အလုပ်သွားဖို့ အိပ်ရာကနေ အတင်းကုန်းရုန်းထရတာလေးတစ်ခုပါပဲ.. ဟဲဟဲ.. စိတ်ကိုမကြည်ကြည်အောင် လုပ်ထားတယ်.. ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီနေ့ဟာ ကျွန်မနဲ့ကျွန်မချစ်သူရဲ့ (၂) နှစ်ပြည့်တဲ့ရက်လေးမို့လို့ပါပဲ..
ဘာမှတော့မထူးခြားပါဘူး... ကျွန်မတို့ ဒီနေ့တွေ့မယ်.. ခရီးတိုလေးသွားဖို့ စဉ်းစားခဲ့ပေမယ့် ပိုက်ဆံမကျန်တော့လို့ မသွားနိုင်တော့ဘူး.. ဆိုးပါတယ်.. တစ်နေ့နေ့တော့ သွားဖြစ်အောင်လုပ်ရဦးမယ်
ဒီနေ့သောကြာနေ့ဆိုတော့ ကျွန်မရုံးတက်ရတယ်.. ညနေပိုင်းမှတွေ့ရမယ့် သူ့ကို ကျွန်မသိပ်လွမ်းတာပဲ တွေ့ဖို့မနေနိုင်တော့ဘူးလို့ မနက်စောစောပြောဖြစ်ခဲ့တယ်.. သူလည်း တူတူပါပဲလို့ပြောအပြီး ကျွန်မတို့ တူတူရီမောခဲ့ကြတယ်..
စနေတနင်္ဂနွေပိတ်ရက်လေး သူ့ကြောင့် ကျွန်မပျော်ရွှင်နေပါလိမ့်မယ်
Posted by အိဖူး at 1:05 AM3comments:
ရှစ်ဇမ္ဗူ ဤမြေမှ ကျွန်မချစ်သူ :)
~ ချစ်သူ ချစ်သူ အပြစ်မယူ ~
အဲဒါသီချင်းလား ဘာလား.. တကယ်တော့ ဘာမှန်းကိုမသိပါဘူး.. ပါးစပ်ထဲ ရွတ်ရွတ်မိနေတယ်..
ရွတ်မိတဲ့အခါ ကျွန်မချစ်သူအကြောင်းကိုလည်း တွေးရင်း မျက်နှာလေးက ခပ်ပြုံးပြုံးပေါ့..
သူကဘယ်လိုပဲ ရစ်တယ်ပြောပြော ဘာတွေပဲဖြစ်နေတယ်ပြောပြော ကျွန်မသူ့ကို သိပ်သိပ်သိပ်ချစ်ပါတယ်.. သူလည်း ဒီလိုပဲ ကျွန်မကို အရမ်းချစ်ပါတယ်.. အထွေအထူးလုပ်ယူနေစရာမလိုတဲ့ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ယုံကြည်မှုလေးတစ်ခုပေါ့
ပျော်ရတယ်.. သူ့ကြောင့်တွေ ခဏခဏ သေမတတ်ငိုဖူးပေမယ့် ကျွန်မသူ့ကြောင့်ပဲ ပျော်ရွှင်ရပါတယ်.. အားကိုးစရာရင်ခွင်တစ်ခုဖြစ်တာမို့ ကျွန်မမှာ သူမရှိရင် မနေတတ်သလောက်ပဲ.. အဲဒိအကျင့်ဆိုးကို ကျွန်မပြင်ရဦးမယ်
ရန်ဖြစ်တဲ့အခါ ကျွန်မက သူ့ကိုဘယ်တော့မှ အလျော့မပေးဘူးလို့ အမြဲပြောတယ်.. မှန်တော့မှန်ပါတယ်.. သူလည်း တခြားနေရာမှာ အနိုင်ယူတာရှိတတ်တာပဲလေ.. နောက်ဆုံးတော့လည်း ရန်ဖြစ် ငိုယို မောသွားပြီး အိပ်ပျော်သွားတာမျိုးလည်း ရှိပါရဲ့.. နိုးလာတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ ကျွန်မရွတ်နေသလို ~ချစ်သူ ချစ်သူ အပြစ်မယူ~ပေါ့ရှင်....
ဒီနေ့ ကျွန်မရဲ့ဘလော့မှာ label အသစ်ထပ်တိုးတယ်.. အဲဒါ သူ့အတွက်ပေါ့....
ကိုယ့်ဟာကိုယ် လက်ခုပ်တီး ဖဲကြိုးဖြတ်ပြီး ဖွင့်ပွဲလုပ်လိုက်တယ်.. အဟက် အဟက်
Posted by အိဖူး at 2:19 AM No comments:
ဘဝမှာ နေမကောင်းဖြစ်ရတာက တော်တော်ပင်ပန်းတယ်.. ကျွန်မ ဒီနှစ်တွေထဲ သိပ်ချူချာပါတယ်.. ဗိုက်အောင့်မယ်၊ ခေါင်းကိုက်မယ်၊ ဖျားမယ်၊ ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲမယ်၊ food poison ကြောင့်အန်မယ် အို အစုံအစုံပါပဲ.. ဘေးနားမှာ အမြဲရှိနေတဲ့လူတွေဆို ကျွန်မကို လက်ဖျားတောင်ခါတယ်.. တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်နေလို့ပါ..
ကျွန်မပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ ကျွန်မချစ်သူကပြောလာပါတယ်.. သူနဲ့ချစ်သူမဖြစ်ခင် သူငယ်ချင်းဘဝ စခင်ခဲ့ကြတုန်းက သိပ်ပြီးတက်တက်ကြွကြွရှိတဲ့ကျွန်မ ဘယ်ရောက်သွားသလဲ.. သူကမေးလာပါတယ်.. ဘာမှမဟုတ်တဲ့မေးခွန်းလေးပါပဲ.. စိတ်ထဲကနေတော့ ပြင်းပြင်းပြပြတောင်းပန်နေမိတယ်..
နေထိုင်မကောင်းဖြစ်ရင် စိတ်ကမကြည်လင်တော့ဘူး.. ဒါနဲ့ပဲ သံသရာတွေလည်ပြီး အရာရာ ကျွန်မအတွက် မကြည်လင်နိုင်တော့ဘူး.. ပြဿနာသေးသေးနဲ့တွေ့လည်း အကြီးတွေချဲ့မိ.. ဘာမှလည်း သည်းမခံနိုင်တော့ပါဘူး..
အနည်းဆုံး သူ့အတွက်တော့ ကျွန်မဆိုးသွမ်းနေတယ်..
Posted by အိဖူး at 1:36 AM 1 comment:
ဘာမှတော့မထူးခြားပါဘူး .. တစ်ခါတစ်လေ စကားများတယ် .. တစ်ခါတစ်လေ စိတ်ကူးယဉ်တယ် .. တစ်ခါတစ်လေ ခပ်ကြောင်ကြောင် .. တစ်ခါတစ်လေ ရူးပေါပေါ ..တစ်ခါတစ်လေ စွာတယ် .. တစ်ခါတစ်လေ ချစ်စရာလေး .. တစ်ခါတစ်လေတော့ အမြင်ကတ်စရာ .. သာမန်လက်နှစ်ဖက် ခြေနှစ်ဖက်နဲ့ မိန်းကလေးပါပဲ ..
.. ဒီတလောတော့ ..
ငါ့ကမ်းပါးကို ရှိုက်နမ်းမယ့် ရေလှိုင်းလေးအသံကြားဆဲပါ
This Cloudy Cell
Please Donate me! :D